सफलताका ७ सूत्रः व्यवहारामा लागु गरे सफल हुनुहुन्छ
सोमबार, कात्तिक ८ २०७८ ०८:२१ PM
वायु सेवा निगमको अध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त: यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु
पाँचथर बस दुर्घटना : घाइतेको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार
काम सुरु गर्न एउटा निश्चित दिशामा कदम उठाउनुहोस्
मङ्गलबार २६ असोज २०७८ ०६:२९ AM
काठमाडौं । हामी जीवनमा सफलता पाउन थुप्रै कामहरु गछौं । प्रत्येक दिन अनेक फैसला तथा निर्णयहरु लिन्छौँ । कुन फैसला वा निर्णय सही हो, कुन सही होइन भन्ने यदि हामीलाई यसको ज्ञान हुने हो भने हामी हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
जब हामीले कुनै निर्णय लिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ, त्यसलाई एक चुनौतिका रुपमा लिन सक्छौँ । फेरि, धेरै मानिसहरु आफ्ना फैसला विगतका घटनालाई आधार बनाएर लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको दिमागले एउटै तरिकाले मात्र काम गर्छ, अचानक आउने चुनौतिको सामना गर्न उनीहरु सफल हुँदैनन् ।
तर, यसको अर्थ के होइन भने हामीले निर्णय नै लिनु हुँदैन । हामीले त यस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ र निर्णय लिनै पर्ने हुन्छ । भारतीय मूलका अमेरिकी लेखक दीपक चोपडाले चाहिँ सफल हुन चाहनेका लागि सात सूत्र दिएका छन् । ती हुन्ः
१. आफ्नो सामु नै चुनौती राख्नुहोस्
२. स्थितिको आँकलन गर्नुहोस्
३. परामर्श लिनुहोस्
४. फैसला गर्नुहोस्
५. काम सुरु गर्न एउटा निश्चित दिशामा कदम उठाउनुहोस्
६. परिणाम हासिल गर्नुहोस्
७. परिणामका लागि जवाफदेयी हुन वा नतिजा स्वीकार गर्न तयार हुनुहोस्